Umhla My Pet » Bonakalisa Uthando lwakho Ngaphandle Amagama
Extreme uthe kulungile xa bathi, “Ngaphezu mazwi onke kufuneka ukuba uyenze ukuze enze lento. Ngoko ke bendingayi kuba ukuthi niyandithanda. Cos mna Ndingathanda sele ndiyazi.” kwi krelemnqa enkulu ukusuka '80, Ngaphezu kwamazwi. Kwaye luhlobo ekugqibeleni ukuba sonke nethemba. Kukho ezininzi iindlela ukubonisa umntu ukuba uziva njani apho kungeyomfuneko ukuba usebenzisa amagama njengesixhobo. Apha ngeendlela ezintlanu ukuxelela umntu ekhethekileyo indlela ovakalelwa ngayo:
Kulungile, ukuze Nngokobuchwepheshe linokuthi kugqalwa oqhathaniselayo kancinane kuba lyrics ngamagama kodwa hayi ilizwi elathethwa. Kukho iingoma ezininzi ezintle ukukhetha ukukhankanya Bryan Adams’ izulu, Ixesha Cyndi Lauper Emva Head Ixesha Alanis rissette phezu Iinyawo kuxhomekeke umyalezo ozama ukuthumela. nca nje irekhodi okanye ukuba sele wayeyimvumi okanye / kunye nemvumikazi kutheni uyinike Hamba serenading lover yakho? Yongeza ube na- ngaphezulu.
iintyatyambo & izipho
Iintyatyambo yindlela omkhulu ukubonisa uthando lwakho ngaphandle zisithi loo nto. Ngoko ke ukuqinisekisa uyazi uthando yakho intyatyambo olithandayo uhambe apho. Okanye kungenjalo aye into athanda ukuba waya iintyatyambo zemveli yioli / aftershave, iinto zokuzilungisa, iincwadi, DVD, etc … Ebonisa ukuba uyazi Bafana yintoni ebonisa uthando lwakho kumntu kuba kubaphulaphula kwaye ukhumbule into athanda. Abantu qaphela ezi zinto nokuba ngaba kuthi nantoni.
Vumela ulawulo Of The Remote Control
Ukuvumela kolawulo lwakho uthando kolawulo lobekelo kude endaweni yokuthatha phezu lonke ixesha ngendlela elimnandi nangokufihlakeleyo yokubonisa uyabathanda. Emveni kwakho konke, azinikele zakho ozithandayo zibonisa ukuba babe nothando, a yi?!
ubugcisa & iifoto
Ukuba zokudala ukudala umfanekiso uthando uthando lwakho inokuba asiyongcamango ngokuthandana ngokwenene. Okanye olunye uluvo nice kukufumana ifoto bobabini zindiyilile, ukuba bammise uthando ubomi bakho.
Yiya kwi kunye / Nditshate nabo
Kaloku akukho ndlela ibhetele kunokubonisa uthando lwakho kumntu sichithe kubo! Ngoko, xa sele ukulungele kwaye ucinga ukuba abe kakhulu, Ingaba ulunde ntoni?!